यौनसम्पर्कपछि पुरुषहरू किन कोल्टे फेर्छन् ? – तहल्काखबर
जीवनशैली रोचक प्रसंग समाज स्वास्थ्य
यौनसम्पर्कपछि पुरुषहरू टाढिन खोज्नुको कारण यो पनि हुनसक्छ । यौनसम्पर्क गर्दा अपेक्षा गरेअनुरूपको आनन्द प्राप्त नभएका कारणले पनि पुरुषहरू आप\_mनो पार्टनरसँग टाढा हुनसक्छन् ।
टेस्टेस्टेरोन हर्मोनको स्तर कम भयो भने पनि पुरुषहरू पार्टनरसँग टाढिन खोज्छन् । यो समान्य कुरा हो । यस्तो अवस्थामा महिला साथीले पुरुषलाई सामान्य बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ र हौसला दिँदै बिस्तारै सम्बन्ध राख्नका लागि उत्साहित बनाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पुरुष टाढियो भने नै पनि कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन किनभने ऊ पुनः र्फकनसक्छ । अनलाइनखबर
← नेपाल उध्यमसिल महिला संघ झापामा पुन: पार्बता खरेल
के हो हिन्दू धर्म, कुन ग्रन्थमा के लेखिएको छ ? →